याद गर्नुहाेस् ! मुटु रोगको यस्ताे खतरनाक लक्षण देखिए तुरुन्तै ज्यान जान सक्छ - ज्ञानविज्ञान
सधैँभरि बालबालिकाको नाकबाट सिँगान बग्ने गरेको छ भने सचेत हुन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । रुघाखोकी लागेको समयबाहेक सधैँभरी एकनासले नाकबाट सिँगान बग्ने गरेको छ भने त्यसले पछि मुटु र श्रवणशक्तिलाई समेत असर पार्नसक्छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका बलबालिकामा एकनास नाकबाट सिँगान बग्ने विभिन्न कारणले हुनसक्छ त्यसलाई हेलचक्य्राइँ नगर्न चिकित्सकले सुझाएका छन् । वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभागका कल्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन डा दिपेन्द्र गौतमका अनुसार सधैँभरी नाकबाट सिँगान बग्दा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सधैँभरी सिँगान बग्दा त्यसले मुटु र फोक्सोलाई असर गरी मुटुले काम नगर्नेसम्म हुनसक्छ । साथै नाकको सम्बन्ध कानसँग पनि हुनेभएकाले त्यसले श्रवणशक्ति कम हुने, कान पाक्ने र पछि बहिरोपनसम्म हुने खतरा हुन्छ, त्यसकारण समयमै उपचार आवश्यक छ ।”
उहाँका अनुसार बालबालिकालाई चिसो भएमा, नाकमा सङ्क्रमण भएमा, नाक पछाडि ग्रन्थी बढेर एलर्जी, पिनास बारम्बार रुघा लाग्ने र नाकमा बाहिरी वस्तु अड्किएर पनि नाकमा निरन्तर सिँगान बग्ने समस्या देखिन्छ ।
गौतमले भन्नुभयो, “बच्चाको नाकबाट एकनासले सिगाँन बग्ने धेरै कारण छन्, सरसफाईका साथै समयमै उपचार नगर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालिन जटिल समस्या ल्याउन सक्छ ।” नाकमा मासु पलाए पनि सिँगान बग्ने समस्या देखिन सक्छ ।
निरन्तर सिँगान बग्ने समस्या भएका बालबालिकालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, सुतेको बेला घुर्ने, निद्रा पूरा नहुने र सिँगानका कारण तिरस्कृत हुने जस्ता समस्या देखिने गर्छ । डा गौतमका अनुसार उमेर बढ्दै जाँदा कसैलाई यो समस्या निको हुदै गए पनि धेरैलाई पछिसम्म असर पर्न सक्छ ।
यस्तो विद्यार्थीको अध्ययनमा समेत मन नलाग्ने, निन्द्रा पूरा नहुँदा विद्यालयमा निदाउने, दिउँसो निद्राका कारण दुर्घटनामा समेत पर्ने खतरा हुने डा गौतमको भनाइ छ ।
यस्ता बालबालिकामा अन्य रोगको सङ्क्रमण पनि छिटो हुने भएकाले आफ्नो दैनिक आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रशस्त पानी पिउने, चिसो खानेकुरा नखाने, धुलो, धुँवा र भीडभाडबाट बचाउने, सागपात, फलफूल प्रशस्त खाने बानीको विकास गर्नुपर्ने चिकित्सको सुझाव छ ।
यी हुन् मुटु रोगका लक्षण र घरेलु उपचारहरू
पहिले–पहिले मुटु रोगलाई वृद्धवृद्धा मानिसहरूको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवा अवस्थाकै मानिसहरूमा समेत डरलाग्दो गरी फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो ।
त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात, कोलेस्टेरोल, युरिक एसिड आदिको समस्या निकै बढेको देखिन्छ । मुटुका धेरै जसो रोगहरू जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन् । आजकल जीवनशैली व्यवस्थित छैन ।
अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटुको रोग । आधुनिक सभ्यता, व्यस्त जीवन, महत्वकांक्षा, भोजभतेर, कम्प्यूटर, टेलिभिजन, अत्याधिक मानसिक तनाव, व्यायामको कमी, पैसा कमाउने दौड यी नै हुन् संक्षिप्तमा मुटु रोग बढ्नुका प्रमुख कारणहरू :
यसकारण जीनव शैलीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको अवस्थामा धेरै हदसम्म मुटु रोग रोक्न सकिन्छ । मुटु रोग नियन्त्रणका लागि जीवन शैली व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ । सुत्ने, उठ्ने, खाने, पिउने, बानी व्यावहार, सोचाई, दिनचर्या आदि सबै जीवन शैलीभित्र पर्दछन् ।
सम्झन सजिलो होस् भनी जीवन शैलीलाई आहार, विहार र विचार गरी तीन वटा पक्षमा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ । मानिसको आहार, विहार र विचारको स्वरूप नै जीवन शैली हो । यी लक्षणहरू देखिएमा सचेत हुनुहोस् कि तपाइँलाई पनि मुटुको रोग सुरु भइसकेको हुनसक्छ ।
मुटु रोगका लक्षणहरु :
६. यदि शरीरको कुनै भाग जस्तै काँध, हात वा गर्धनको पछिल्लो भागले काम गर्न छाड्यो वा छुँदा पनि थाहा हुँदैन भने हेलचेक्र्याई नगर्नुहोस् । त्यो मुटु रोगको लक्षण हुनसक्छ
। ७. यदि तपाईलाई बोल्दा अप्ठेरो महशुस हुन्छ, स्पष्ट उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न वा जिब्रो लरबरिन्छ भने त्यो मुटु रोगको लक्षण हुनसक्छ ।
मुटु रोगको हेरचाह :
४. बेलुकीको खानामा २ वा ३ वटा सुख्खा गहुँको रोटी, साग र मौसमी तरकारी हुनुपर्छ । बेलुकीको खाना ८ बजेभित्र खाइसक्नुपर्छ । बिहान एक छाक मात्र भात खाने गर्नुपर्छ । खानाको मात्रा सबैको लागि एकैनास हुँदैन । धेरै शारीरिक श्रम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै गर्नेले थोरै खाने गर्नुपर्छ । काम कम भए खाना धेरै गर्नु हुँदैन । बेलुकीको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नु हुँदैन, कम्तीमा दुई घण्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ ।
५. शाकाहारी हुनु मुटुका लागि फाइदा जनक छ । तर नियन्त्रित रूपमा माछा, मासु खाएमा हानी छैन । खसी, राँगो, बँगुरले कोलेस्टेरोल धेरै बढाउँछ । माछा र कुखुराले कम बढाउँछ । चिल्लो नराखी माछा र कुखुरा पकाएको मात्र खानुपर्छ । यस्तो खानाले हानी गर्दैन । माछा मासु बिहान र दिउँसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुकी माछा मासु नखानु नै उत्तम हुन्छ ।
मुटु रोगको घरेलु उपचारहरू :
२. एउटा प्याज लिनुहोस् र त्यसलाई पिनेर त्यसको जुस निकाल्नुहोस् । अब दुई चम्चा प्याजको जुस र शुद्ध मह मिसाउनुहोस् र यसको प्रयोग दिनमा तिन पटक प्रयोग गरेमा ब्लड प्रेसर र मुटुको रोग भएकोलाई धेरै फइदा गर्दछ । सधँै खाना खाँदा काचो प्याज वा लसुनको प्रयोग गरेमा यसको समस्या कम हुँदै जानेछ ।
Don't Miss it सावधान ! यस्ता गलत बानीले तपाइकाे दिमाग कमजोर बनाइरहेकाे छ, जान्रुहाेस्
Up Next यस्ता काम गरे आँखाको शक्ती बढाउन सकिन्छ, जान्नुहाेस्
हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनबाट निम्तिन सक्छ रोग, जन्नुस कसरि
बेलुकीको खाना खाइसकेपछि जंकफुड खाने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन । कतिपयले खानापछि चिया-कफी लिने गर्छन्, जसलाई स्वस्थकर मानिँदैन । तर,…